ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, November 19, 2007
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ...မှန်ကြည့်တိုင်း အခါခါသေနေတဲ့ လူတွေ မှန်မကြည့်တော့ဘဲ လူတွေကိုပဲကြည့်ပြီး အပြစ်ပြောနေ တာနဲ့စာရင် လူတွေကိုမကြည့်ဘဲ မှန်ကိုပဲ ကြည့်နေတာ ကပိုကောင်းသလိုလို ပါပဲဗျာ....။
I like mirror very much. That's why i love myself too much. right?
အကိုရေ။ ရယ်လဲ ရယ်ရ၊ တွေးလဲ တွေးရပါ့ဗျာ။ အရေးအသားကလဲ ရှယ်ပဲဗျို့။ အားကျပါပေ့။
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ အရေးအသားကတော့အားကျစရာပဲ ရယ်လည်းရယ်ရပါပေ့ အခုတလောဖတ်ဖြစ်တဲ့ ပိုစ့်တွေထဲမှာ ဒီပိုစ့်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ